Haddii Beale Street Hadli Karto Wuxuu Ahaa Ku Guuleystaha Weyn Abaalmarinta Ruuxa Madaxbannaan - Dhaqanka Pop
Haddii Beale Street Hadli Karto Wuxuu Ahaa Ku Guuleystaha Weyn Abaalmarinta Ruuxa Madaxbannaan
Haddii Beale Street Hadli Karto wuxuu ahaa mid ka mid ah xoqitaannada la dareemi karo ee ku jira liiska magacyada Oscar. La qabsiga James Baldwin ayaa si isku mid ah u dhaariyay dhagaystayaasha iyo kuwa wax naqdiya, laakiin waxay ku guuldarreysteen inay soo xushaan wax magacaabis ah qaybaha waaweyn sida Agaasimaha ugu Fiican iyo Sawirka ugu Fiican. Filimku wuxuu lahaa habeen banner ah Abaalmarinta Ruuxa Madaxbannaan, si kastaba ha ahaatee. Filimka 'Barry Jenkins' oo ah filim caan ah ayaa ku guuleystay guulo ka badan filim kasta, isagoo gurigiisa ku qaatay Muuqaalka ugu Fiican, Agaasimaha ugu Fiican iyo Abaalmarinta Dumarka ee Taageerta Ugu Fiican Aktarada Regina King.
Markay Oscars -ku soo dhowaadaan, Jenkinsonly waxay leedahay qayb la daawado. Wuxuu diyaar u yahay shaashadda ugu habboon ee la habeeyay habeenka ugu weyn warshadaha filimada. Iyadoo la tixgelinayo jaceylka Jenkins dadaalkii hore Iftiinka Dayaxa , ka soo baxa qaybaha guud ee waaweyn waa wax lala yaabo. Waxqabadka boqorrada ee filimka ayaa ahaa mid aan la dafiri karin, waxayna sidoo kale u taagan tahay abaalmarinta keli -ahaanta ah ee Atariishada Taageeridda ugu Fiican.
waxaan ku noolnahay bulsho meesha
Jenkins wuxuu isticmaalay khudbadiisii ​​aqbalaadda Agaasimihii ugu Wanaagsanaa si uu ugu doodo madal weyn oo loogu talagalay agaasimayaasha dumarka iyo aqoonsiga weyn ee agaasimayaasha Oscars -ka.
Ma rabin inaan ku guuleysto abaalmarintan nacasnimada ah. Iyada oo wax walba ka socdaan adduunka, waxay dareemeysaa wax la yaab leh inaan halkaan joogo, ayuu yidhi. '[Boqorku] wuxuu yiri wax aad u xikmad iyo run badan. Dumarku kaliya waxay ka yihiin boqolkiiba afar agaasimayaasha istuudiyaha haddana waxay ka yihiin 44 boqolkiiba agaasimayaasha tartanka Sundance waxayna ka yihiin 60 boqolkiiba kuwa u sharaxan abaalmarintan.
Haddii xitaa boqolkiiba 30 annaga oo keliya aan ku raacnay Regina in, 18 -ka bilood ee soo socda gudahood, in la soo saaro ama la maal -galiyo filim ay hagayso haweeney, afarta boqolkiiba waxay noqon doontaa sideed boqolkiiba, waxay noqon doontaa 12 boqolkiiba, waxay noqon doontaa boqolkiiba 16. '
xilli ciqaabeedka 2 taariikhda sii deynta netflix
Ma jiro haween u tartamaya Agaasimaha ugu Fiican Oscar -ka sanadkan.
ciyaartoydii ugu fiicnaa ee nba ee abid boos ahaan
waa maxay sababta kubbadda masduulaaga z aad loogu jecel yahay
maxaa ku cusub netflix bishii febraayo